हेर्नुहोस् अब कुन दल कत्रो ? - Deshko News Deshko News हेर्नुहोस् अब कुन दल कत्रो ? - Deshko News
हेर्नुहोस् अब कुन दल कत्रो ?
स्थानीय तहको निर्वाचनमा नगर प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्ष पदमा बढी स्थान जितेर पहिलो बनेको नेकपा एमालेले समग्रमै स्थानीय तहको सम्पूर्ण पदको ४५ प्रतिशत हिस्सा जित्न सफल भएको छ।
पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको स्थानीय तहको सम्पूर्ण पदमा एमालेले अन्य दललाई उछिनेको छ। आजको कान्तिपुरमा खबर छ।